အဆိုပါ ventral striatum အတွက် dopamine D2 receptors အကြားဆက်စပ်မှုနှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏အလယ်ပိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့ (2004) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်
အဆိုပါ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ (2) ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် dopamine D2004 receptors အကြားဆက်စပ်မှု
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004 Oct;161(10):1783-9.
Heinz တစ်ဦးက1, Siessmeier T က, Wrase J ကို, Hermann: D, Klein က S, Grüsserသည် SM, flor H ကို, Braus DF, Buchholz HG, Gründer, G, Schreckenberger M က, Smolka MN, Röschက F, မန်း K သည်, Bartenstein P ကို.
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004 ဒီဇင်ဘာ; 161 (12): 2344 ။ Grüsser-Sinopoli, Sabine M က [Grüsser, Sabine M ကမှတညျ့] ။
အလွဲသုံးစားမှုအရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနျူကလီးယပ် accumbens ပါဝင်သည်သော ventral striatum အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်, ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်၏အဓိကဒေသလှုံ့ဆော်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစားသုံးမှုအားကောင်းလာစေပါတယ်။ နာတာရှည်အရက်စားသုံးမှု detoxification ပြီးနောက်ဗဟို dopamine: D (2) receptors ၏ဆင်း-စည်းမျဉ်းများနှင့် D ကို၏နှောင့်နှေးပြန်လည်နာလန်ထူ (2) အဲဒီ receptor sensitivity ကိုအပြုသဘော relapse အဘို့အမြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ ventral striatum အတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာ: D (2) အဲဒီ receptor ကမောက်ကမဖြစ်မှုအရက်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခု dopamine-မှီခိုအမှားထောက်လှမ်း signal ကိုများနှင့်ဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူမက်လုံးပေး salience အလွန်အကျွံထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆီသို့ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စနစ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်။
multimode ပုံရိပ်, အ radioligand [(18) က F] desmethoxyfallypride နှင့် positron ထုတ်လွှတ် tomography အဖြစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) နဲ့, 11 13 ကျန်းမာယောက်ျားနှင့်အတူအထီးအရက်သမား detoxified နှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ စာရေးသူအရက်တဏှာနှင့်အရက်တွေကိုဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတူ ventral striatum အတွက် dopamine receptors -like: D (2) ၏အသင်းအဖွဲ့တိုင်းတာ။
အရက်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် medial prefrontal cortex နဲ့ striatum ၏ activation, ကြားနေအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် activation မှဆွေမျိုး, ကျန်းမာလူထက် detoxified အရက်သမားအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအရက်သမားအရက်တဏှာပြင်းထန်မှုနှင့် fMRI နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ် medial prefrontal cortex နဲ့ anterior cingulate ပိုမို cue-သွေးဆောင် activation နှင့်ဆက်စပ်သော ventral striatum အတွက် receptors, -like: D (2) ၏လျော့နည်းရရှိနိုင်မှုကိုပြ။
အရက်တွေကိုတပ်မက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောကွန်ရက်အလွန်အကျွံ activation ထုတ်ယူနိုင်အောင်အရက်သမားခုနှစ်, ventral striatum အတွက် dopaminergic ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အရက်-ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့မက်လုံးပေး salience attribute လိမ့်မည်။